Izindaba - YINI I-MICROFIBER TOWELS?
Amathawula we-Microfiber ashintsha indlela ohlanza ngayo ikhaya lakho nezimoto. Imicu ye-ultra-fine inikela ngezinzuzo eziningi noma ngabe usebenzisa amathawula kanjani. La mathawula we-microfiber amunca, futhi omile ngokushesha azowenza umsebenzi wenziwe! I-oda lamathawula we-microfiber wholesale namuhla.
Ayini amathawula we-Microfiber?
Iyini ngempela i-microfiber? Uma ubheka indwangu ye-microfiber, ungacabanga ukuthi ibukeka futhi izwakala ifana nethawula likakotini. Kodwa-ke, kunokwehluka okuhlukile. Igama linikeza umbono wokuthi yini eyenza indaba ihluke. Imicu eyakha okokusebenza incane kakhulu. I-Microfiber iyahluka ngobukhulu bezintambo ngokuya ngokuthi yenziwa kanjani, kepha ingaba ngokwesilinganiso phakathi kokuphindwe izikhathi eziyishumi kuya kwezingama-50 kunentambo yezinwele zabantu. I-Microfiber ingaba nemicu engaba ngu-200,000 ehlanganisa yonke intshi eyisikwele.
Leyo fiber emincane iqala njengokuhlanganiswa kwe-polyester ne-polyamide, okungelinye igama lenyiloni. I-Polyester iyinto eqinile, eqinile esiza i-microfiber ukuthi ibambe kahle. Ingxenye ye-polyamide yendwangu isiza ngekhwalithi ye-absorbency futhi yenze amathawula ome ngokushesha. Izilinganiso eziqondile zalezo zinto ezimbili zingahluka ngomkhiqizi, kepha izindwangu eziningi ze-microfiber zisebenzisa zombili. Ngemuva kokuhlanganiswa ndawonye, ​​imicu iyahlukaniswa ukuze yenze kahle kakhulu. Uma ubheka imicu ngaphansi kwesibonakhulu, uzobona ukuthi zifana nezinkanyezi. Zigcina zihle kakhulu kunezintambo zikasilika, futhi imicu incane kakhulu kunokotini.
Ubukhulu obuqondile bezintambo buhluka kakhulu ngomkhiqizi. Ama-fibers alinganisa i-1.0 denier noma amancane abhekwa njenge-microfiber, kepha ezinye zezinto ezingcono kakhulu ze-microfiber zinesilinganiso se-0.13 denier. Abanye abakhiqizi baphinde bakhiqize imikhiqizo ehlukene enezilinganiso ezahlukahlukene zokubamba imisebenzi ehlukile.
Ngoba imicu mincane kakhulu, miningi kakhulu kunaleyo oyithola kukotini namanye amathawula. Inani elikhulile lemicu linikeza indawo enkulu engaphezulu kwendwangu ye-microfiber, eyandisa ukusebenza kwayo ekuhlanzeni.
Izinzuzo zamathawula we-Microfiber
Iningi labantu lithola ukuthi amathawula we-microfiber ahlanzeke futhi omile kangcono kunezinye izinto, ikakhulukazi amathawula wephepha. Uma sidiliza izici ezithile zala mathawula, singakhomba izizathu abantu abavame ukuzikhethela ukuzihlanza.
Izinzuzo zokusebenzisa amathawula we-microfiber zifaka:
o Ukumunca: Isakhiwo se-microfiber senza amathawula angene kakhulu, okwenza abe nomfutho omkhulu. Le micu ingamunca isisindo esiphindwe kasikhombisa kuye kwesishiyagalombili. Ungasula ukuchitheka noma usule izindawo ozihlanza ngokushesha okukhulu.
o Ukomisa okusheshayo: Enye inzuzo yedizayini enamaphaphu ukuthi amathawula we-microfiber ayoma ngokushesha. Uma usebenzisa amathawula kaningi emisebenzini ehlukahlukene yokuhlanza, leso sikhathi sokumisa ngokushesha siyinzuzo ethile ngesikhathi esizayo lapho usidinga khona. Lapho ithawula seligcwele, khipha amanzi kahle, bese loma ngokushesha.
o Ubumnene: Amathawula we-Microfiber athambile lapho uthinta. Lokhu kuthambeka kwenza kube lula ukusebenzisa futhi kuphephe ezinhlobonhlobo zezindawo.
o Enye indlela enobungani: Uma usebenzisa amathawula wephepha noma eminye imikhiqizo yokuhlanza elahlwayo, udala udoti omningi. Uma usebenzisa izindwangu ze-microfiber, ungaphinda uzisebenzise njalo lapho uhlanza. Kulula nokuzihlanza, ngakho-ke zingathola ukusetshenziswa okuningi.
o Ukuhlanza ukungcola namagciwane: Imicu emihle ese-microfiber inikeza indawo engaphezulu, ngakho-ke ukungcola ngisho namanye amagciwane abambelela kule micu kalula. IMicrofiber ibonakala inomphumela oheha ukungcola othatha ukungcola futhi ukunamathele, ngakho-ke awumane nje uyicindezele ngaphezulu. Ungakwazi ukuhlanza ngempumelelo izindawo ezahlukahlukene ngomzamo omncane kunezinye izinhlobo eziningi zamathuluzi wokuhlanza.
o Icala Static: Ngeziphetho eziningi kangaka ku-microfiber ehlukanisiwe, indwangu ngokwemvelo idala ukushaja oku-static kubo ngokuzihlikihla ndawonye. Leyo nsiza emile isiza ekuthatheni ukungcola nenye imfucumfucu, futhi ukungcola kuhlala lapho kuze kugezwe indwangu.
o Ukuhlanza okuncishisiwe: Ngoba i-microfiber iyasebenza kakhulu ekucosheni ukungcola, ungahle usule indawo ngaphandle kokusebenzisa izinto zokuhlanza noma insipho. Le nzuzo isho ukuthi ungaphuma ngamakhemikhali ambalwa ekhaya lakho.
o Ukuhlanza isikhala esincane: Imicu emihle ku-microfiber ingakusiza uhlanze ezindaweni ezincane. Imicu emincane ifinyelela emifantwini nasemifantwini amanye amathuluzi okuhlanza angalahlekelwa yiyo. Ukuma kwenkanyezi kwemicu kuyabasiza nokuthi bafinyelele kulezo zindawo ezincane kangcono.
o Isikhathi eside: Izindwangu zeMicrofiber zingahlala ngokuwashwa okuphindaphindiwe. Imvamisa zihlala kaningi njengokuhamba okungaba yinkulungwane emshinini wokuwasha. Ngokuphila isikhathi eside okunje, uthola imali yakho ibalulekile kulawa mathuluzi wokuhlanza asebenzayo.
Usebenzisa amathawula we-Microfiber ukugeza imoto yakho
Ngaphezu kokuba wusizo ekuhlanzweni kwendlu noma kwehhovisi, amathawula we-microfiber athandwa kakhulu ekuhlanzeni izimoto. Ukumunca kungenye yezinto eziphambili ezenza i-microfiber ikhange lapho kunemininingwane yemoto. Ithawula lakho le-microfiber lingasula ngokushesha amanzi emotweni ngemuva kokuligeza ukuvimbela ukubonwa. Ungasebenzisa futhi amathawula we-microfiber ngenqubo yangempela yokuhlanza esikhundleni seponji noma enye indwangu.
Qala ngokwenza ibhakede lamanzi afudumele anensipho. Gcoba ithawula lakho le-microfiber emanzini anensipho. Ukuqala phezulu emotweni, geza isigaba ngasinye ngendwangu ye-microfiber. Ukusebenza esigabeni esisodwa ngasikhathi kuqinisekisa ukuthi umboza yonke indawo, ngakho-ke yonke imoto ibukeka icwebezela futhi iyintsha.
Lapho usula imoto, gcina isandla sakho sicabalele phezu kwethawula le-microfiber. Lokhu kukunikeza ukuxhumana okwengeziwe ebusweni, ukuze ukwazi ukuhlanza kangcono. Hambisa ngokunyakaza okuyindilinga. Kufanele uqaphele ukuthi ithawula le-microfiber licosha ukungcola futhi likususe emotweni kunokuthi liyigudluze lisuke esigabeni semoto liye kwesinye.
Faka ithawula lakho le-microfiber emanzini anensipho njalo. Lokhu kusiza ukuqeda ukungcola okuthile izingibe zethawula njengoba uhlanza imoto. Shintsha indwangu emanzini ukusiza ukukhulula ukungcola. Bamba ithawula elisha uma imoto yakho ingcolile ngokwengeziwe, futhi indwangu ilahlekelwa ukusebenza kwayo.
Uma imoto yakho ihlanzeke ngokuphelele, yigeze kahle usebenzisa amanzi amasha avela ku-hose noma amabhakede. Qhubeka uhlambulule uze uqiniseke ukuthi akusekho insipho emotweni. Ukuhlanza insipho ngokuphelele kuyisihluthulelo sokugwema ukuphela okune-streaky. Kungcono ukuqala phezulu bese usebenza phansi, ngakho-ke insipho ayiphindeli emuva esigabeni ngemuva kokuyigeza.
Ukomisa Imoto Yakho Ngezindwangu zeMicrofiber
Esinye isinyathelo esibalulekile ekuvimbeleni amabala nemifudlana ukomisa imoto yakho ngesandla esikhundleni sokuyivumela ukuthi yome. Yilapho ithawula le-microfiber elisha lifika kahle. Ukubamba ithawula elisha, elihlanzekile kuvimbela noma iyiphi insipho esele ukubuyela emotweni idale imigwaqo.
Beka ithawula emotweni ngesandla sakho siyisicaba. Ukuqala phezulu emotweni, yoma isigaba ngasinye ithawula livulekile futhi liyisicaba ukukhulisa ukuthintana komhlaba nokusheshisa inqubo yokumisa.
Ekugcineni, ithawula lakho le-microfiber cishe lizoqala ukugcwala. Ingabamba kuze kube kasikhombisa noma kasishiyagalombili isisindo sayo kuketshezi, kepha ifinyelela ubukhulu bayo kwesinye isikhathi. Misa ngezikhathi ezithile ukukhipha amanzi amaningi ngangokunokwenzeka. Ngenxa yokwakheka kwayo okuhlukile, i-microfiber izoma ngokumangazayo futhi isamunca kakhulu.
Uma ithawula liqala ukungcola kumfucumfucu osele, yinike ukugeza ngokushesha emanzini amasha ahlanzekile. Khipha okweqile, bese uqhubeka nokumisa imoto. Ungadinga ukweqa imoto okwesibili ukuze ususe noma yimuphi umswakama osele ebusweni bemoto.
Okunye Ukusetshenziswa Kwethawula leMicrofiber
Imininingwane yemoto ukusetshenziswa okuthandwayo kwamathawula we-microfiber, kepha kunezindlela eziningi zokusebenzisa lezi zindwangu ezisebenzisekayo ezungeze ikhaya lakho noma ihhovisi. Basebenza ngezinjongo eziningi zokuhlanza kunoma yisiphi isilungiselelo.
Okunye ukusetshenziswa kwamathawula nezindwangu ze-microfiber kufaka:
o Ukomisa okuchithekile: Ukumunca kwayo okuphezulu kwenza i-microfiber ibe yinto ekahle yokugcina izinto zichitheka. Gcina amathawula ekhishini, ezindaweni zokusebenza nakwezinye izindawo lapho kungenzeka kuchitheke khona. Ungamunca uketshezi ngokushesha ngaphambi kokuba lusabalale noma lwenze ukungcola okukhulu.
o Izindawo ezomile: Ngoba i-microfiber ishajiwe ngokwezibalo, yenza umsebenzi omuhle wokuheha uthuli kuzimele zezithombe, emashalofini nakwezinye izindawo ezisendlini yakho. Ibamba lolo thuli esikhundleni sokuyicindezela nje noma ukuyenza iwele kwezinye izindawo. Uma unezindwangu ze-microfiber, awudingi izinto zokuhlanza uthuli.
o Ukusula imishini yokusula ekhishini: Ukusebenza kwe-microfiber kwenza kube yindlela ekahle yokuhlanza amatafula akho. Ungasula ubuxhakaxhaka obuningi ngaphandle kokumanisa ithawula. Uma unenkinga enenkani, nciphisa kancane i-microfiber ukuze uyihlanze. Njengoba i-microfiber ibuye ibambe amanye amabhaktheriya, ukuyisebenzisa ukuhlanza ikhishi lakho kungasiza ekuqedeni amagciwane ukuze kugcinwe izingqwembe zihlanzekile.
o Ukuhlanza zonke izindawo zokugezela: Enye indawo ehlomula ngokuhlanza okuhle yindlu yokugezela. Gcina amathawula we-microfiber esandleni asetshenziselwa ukuhlanza kuphela izindawo zokugezela. Futhi zilungele ukusula iziziba zamanzi ngemuva kokugeza ngoba ziyamunca.
o Izindawo zokusula ezithintwa njalo: Ama-Doorknobs, switch switch kanye nezinye izinto ezifanayo zithola ukuthintwa okuningi usuku ngalunye. Lokho kufaka ukungcola okuningi, amagciwane kanye nenye imfucumfucu. Zihlanze njalo ngamathawula we-microfiber ukusiza ukunciphisa ukusabalalisa lezo zingcolisi.
o Ukuhlanza amawindi ngaphandle kwemigqa: Isimo esisheshayo se-microfiber senza kube kuhle ekuhlanzeni amawindi akho ngaphandle kwemigqa. Ungakwazi ukupholisha amafasitela ahlanzekile ngaphandle kokuhlanza.
o Imishini yokusula: Susa ukungcola, uthuli nokunye udoti kusuka kuzinto zakho zokusebenza nge-microfiber.
o Ukuhlanza phansi: Uma ungakhathazeki ukufika phansi ezandleni nasemadolweni, ungasula phansi kwakho usebenzisa amathawula we-microfiber. Nciphisa ithawula kancane ukusiza ukususa amamaki okungcola.
o Noma yimuphi umsebenzi wokuhlanza lapho ujwayele ukusebenzisa amathawula wephepha noma ezinye izindwangu: IMicrofiber ilungele ngokuyisisekelo noma yimuphi umsebenzi wokuhlanza onawo ekhaya noma ehhovisi.
Amathiphu wokusebenzisa amathawula we-Microfiber
Ungasebenzisa amathawula we-microfiber kunoma yimuphi umsebenzi wokuhlanza, kepha adinga ukunakekelwa okuthile. Uma unakekela amathawula akho e-microfiber, abambelela kangcono futhi ahlala isikhathi eside, ngakho-ke ukhulisa utshalomali lwakho.
Sebenzisa lawa macebiso ukusebenzisa kahle amathawula wakho we-microfiber:
o Zigeze njalo: Ukuwasha njalo kugcina amathawula akho e-microfiber ehlanzekile futhi elungele umsebenzi olandelayo wokuhlanza.
o Nciphisa umswakama: Uma umanzisa ithawula ukusula i-smudge, vele usebenzise amanzi amancane. Ngoba i-microfiber inesibindi, ayithathi amanzi amaningi ukuyenza ithuluzi lokuhlanza elisebenza kahle. Ukweqa ithawula ngokweqile kungenza lingasebenzi kahle futhi kubangele ukuthi ithawula licindezele ukungcola nxazonke esikhundleni sokulicosha.
o Ikhodi yombala: Uma usebenzisa amathawula we-microfiber emisebenzini ehlukene, thenga imibala ehlukahlukene ukuvimbela ukungcoliswa okuphambene. Sebenzisa umbala owodwa wamathawula we-microfiber ezimotweni, umbala owodwa wezindlu zangasese nomunye umbala emakhishini. Ungasho kalula ukuthi ithawula ngalinye liya kuphi ukuvimbela ukusabalalisa amagciwane noma amabhaktheriya ezindaweni ezahlukene zasekhaya.
o Gwema amakhemikhali anokhahlo: Ngenkathi i-microfiber ingamelana nokusetshenziswa ngamakhemikhali amaningi, kungcono ukugwema noma yini enokhahlo, njengamakhemikhali ane-asidi. IMicrofiber empeleni yenziwe ngepulasitiki, ngakho-ke ungasebenzisi noma yini engalimaza ipulasitiki. Izindwangu zeMicrofiber zisebenza kahle kakhulu ekuhlanzeni ukungcola ngaphandle kokuhlanza, ngakho-ke ungahle ungadingi lutho.
Ukunakekela Amathawula Wakho We-Microfiber
Ukuhlanza njalo amathawula akho e-microfiber kubalulekile ukuwagcina. Ziyasebenza ekutholeni ukungcola namagciwane, ngakho-ke uzofuna ukuwageza njalo ukuze ususe lezo zingcola. Ukwehliswa kwemali kugcina amathawula ebukeka emuhle ngenkathi kuwenza ahlanzeke ngokwengeziwe.
Uma uvula amathawula wakho we-microfiber, uwageze wedwa. I-lint evela kwezinye izingubo nezinhlobo ezahlukene zamathawula zingabambelela ku-microfiber uma uzigeza ndawonye. Ngisho izingcezu ezincane zelineni likakotini zingabambeka ezintanjeni ezincane zamathawula akho zibenze zingasebenzi.
Sebenzisa le mihlahlandlela yokugeza:
o Geza amathawula we-microfiber emanzini afudumele. Gwema amanzi ashisayo.
o Sebenzisa inani elincane lomthamo woketshezi omnene, hhayi okokuwasha okuyimpuphu.
o Gwema isithambisi sendwangu kanye neblitshi. Zombili zinganciphisa ukusebenza kwamathawula futhi zinciphise isikhathi sempilo yazo.
o Yomisa amathawula we-microfiber endaweni yokushisa ephansi ngaphandle kwamashidi wokomisa. Izinhlayiya ezincane ezivela emashidini wokomisa zingabambeka ezintanjeni zendwangu, ezingayenza ingasebenzi. Noma yiluphi uhlobo lwesithambisi sendwangu, kufaka phakathi amashidi wokomisa, nakho kungathinta ukukhokhiswa kwendalo kwendalo, okunciphisa ukusebenza kwayo ekutholeni ukungcola.
o Amathawula we-Microfiber avame ukuthatha imizuzu embalwa kuphela ukoma. Hlola ukoma kwamathawula ngezikhathi ezithile ukuze ugweme ukuwagcina kusomisi isikhathi eside kunesidingo.
Isikhathi Iposi: May-25-2021
Ntambo Dyed Beach ithawula, Ama-Coral Pajamas, Ikhathuni Ukuphrinta Beach ithawula, I-Disney Ukuphrinta Ibhishi Ithawula, Isikhwama seTape Beach, Ithawula leMicrofiber Pure Color Beach,